Home - Waxaan AM YEMEN
Dagaal aan sinnayn
kumanaan qof ayaa ku barakacay
Wadada, badda, cirka
Gaajo iyo cudur malaayiin
Cunto la’aan iyo dawo la’aan
Dhaawac iyo dil dad rayid ah
Fadlan dooro luuqadaada
kooban oo ka mid ah dagaal Yemen ah
In 2015 iyo ka dib Yemen ee madaxweynaha is casilay iyo in uu soo baxsado ka Yemen, dagaal aan qummanaynu ka dhanka Yemen ayaa la soo rogeen by Saudi Arabia iyo United Arab Emirates. dowladaha Yurub iyo Mareykanka ka dhigay dambiyada xun ka gees ah dadka Yemen difaaci karin, taas oo kun oo carruur ah iyo dad rayid ah ayaa lagu dilay, by iibinta hubka iyo taageerada Saudi Arabia halkii ka hortagga iyo dhexdhexaadinta isku arrintan. dambiyada ka mid ah ayaa kaliya aan ku xaddidnayn weerar military laakiin hareereeyeen dhulka Saudi Arabia, hawada, iyo badda ee Yaman si ay u xiri galo oo cunto iyo daawooyin si ay dalka oo halis nolosha malaayiin dad ah. Sida ay sheegayaan wararka ka soo ururada caalamiga ah, dambiyadan ayaa ahaa masiibadii bani'aadamnimo ee ugu xumeyd dhowr iyo tobankii sano ee la soo dhaafay waxayna sababtay gaajo waxayna bilaabeen cuduro sida daacuunka.
sawiro dheeraad ah oo ku
Iyadoo la sii daayo wararka iyo sawirada kuwaas oo in website this, waxa ay isku dayeen in ay wargeliyaan dadka ka mid ah dembiyada oo la socday bandowgu ah ee hay'adaha news Saudi-shabaab, si loo soo afjaro dagaalka aan qummanaynu this by dibad-ka adduunka oo dhan.
Fadlan qor email inuu la socdo wararkii ugu dambeeyay oo ay taageerto shacabka Yemen
Qaramada Midoobey waxay cambaareyneysaa shaqo joojinta Yemen ee ay ku dhinteen ilaa iyo sagaal carruur ah UN-ku waxay cambaareyneysaa duqeynta Yemen ee ay ku dhinteen illaa iyo sagaal carruur ah
Sebtember 4, 2020 32860 0 2
Cunug ku jira isbitaal kadib markii uu ku dhaawacmay duqeyn dhanka cirka ah oo ka dhacday gobolka waqooyi ee Jawf, Yemen, bishii Luulyo, 2020. Illaa sagaal carruur ah ayaa ku dhimatay duqeymo xagga cirka ah oo ka dhacay waqooyiga gobolka Jawf ee gobolka Yemen Khamiistii ...
Yemen Waxay U Aragtaa Inay Ku Laabato Heerarka Digniinta ee Hubaal la'aanta Cunnada: UNICEF, WFP, FAO
Sebtember 4, 2020 34275 0 2
Dagaalkii Sucuudigu horseedka ka ahaa, daadadka, ayax cidla ah, oo hadda COVID-19 waxay abuurayaan duufaan dhammaystiran oo rogi karta guulaha sugnaanta cuntada ee aad looga kasbaday Yemen, ayaa ka digay qaybinta wajiga sugnaanta cuntada ee isku dhafan ...
Sacuudiga, Imaaraatka waxay u adeegsadeen Bambooyin Kooxda Xudeyda ee Yemen: Sarkaalka UN-ka
Sebtember 4, 2020 34299 0 2
Sacuudi Carabiya iyo Imaaraatka Carabta (Imaaraadka), xubnaha muhiimka ah ee isbahaysiga dagaalka ku haya Yemen, waxay gaysteen bambooyin kooxdu ka dhan tahay xaafad la deggan yahay oo ka tirsan gobolka xeebta galbeed ee waddanka..
A: Yemen oo qarka u saaran ‘macaluushii adduunka ugu darneyd 100 sano ’
Juunyo 11, 2020 37217 0 2
Qaramada Midoobay ayaa ka digtay in Yemen ay wajaho macluul tii ugu darneyd 100 sanado hadii aan la joojin duqeymaha cirka ee xulufada uu hogaamiyo Sacuudiga, The Guardian ayaa soo warisay Isniinta. Haddii dagaalku sii socdo, abaar baa haleeli karta ...
Waxaa goobta dad ay u caawin lahaayeen dadka Yemen ka dhanka ah dembiyada ee Saudi Arabia iyo joojiyo in ay go'doominta badan-sano ayaa galaaftey nolosha malaayiin
Connect Iyadoo Us